रोचक बिचित्र – Page4– JanaSanchar.com
पुरुषले जिते सुन्दरी प्रतियोगिता, तर कसरी ?
महिलाबीच हुने सुन्दरी प्रतियोगिताको उपाधि कुनै पुरुषले जित्न सक्ला ? यो मनगढन्ते जस्तो लाग्नसक्छ । तर २२ वर्षका एक फेसन मोडेल कजाकिस्तानमा भएको मिस भर्चुअल कजाकिस्तान नामक सुन्दरी प्रतियोगिताको फाइनल राउन्डमा पुगे । वास्तविक नाम इले डियागिलेभ भएका अरिया अलियेवा मिस भर्चुअल कजाकिस्तानका लागि भैरहेको अनलाइन प्रतियोगिताको फाइनलमा..
पेटमा ड्रग्स लुकाएका अभियुक्तले दिसा गर्न नमानेपछि…
कुनैपनि मानिस दिसा नगरी कति दिनसम्म बस्न सक्दछ होला ? एक दुई दिनपनि गाह्रो पर्दछ । अझ २० दिनसम्म ट्वाइलेट नजाने भन्ने कुरा त कल्पना गर्नै गाह्रो हुन्छ । तर बेलायतमा एकजना मानिस भने २० दिनसम्म दिसा नगरीकन किर्तिमान कायम गरेका छन् । बेलायतको हार्लोमा बस्ने ती व्यक्तिले यति धेरै दिनसम्म शौच नगर्नुको कारण छ । उनले आफ्नो सरीरभित्र ड्रग्स..
ब्यागभित्र कोचेर मानव तस्करी !
तपाईंले मानव तस्करीका धेरै समाचार सुन्नुभएको होला । तर, मानिसलाई ब्यागभित्र कोचेर तस्करी गरिएको घटना भने नौलो लाग्न सक्छ । यस्तै भएको छ इटलीमा । त्यहाँ एक ब्रिटिश मोडललाई सुटकेसभित्र कोचेर यौनदासीका रुपमा तस्करी गरिएको हो । उनी गत जुलाईमा अपहरणमा परेकी थिइन् । ब्रिटिश मोडल च्लोइ एइलिङमाथिको ज्यादतिबारे बुधबार एउटा मुद्दाको सुनवाईका..
हवाईजहाजभित्र नांगै भएर यात्रुले तमासा गरेपछि.
अमेरिकाको सिएटलबाट एंकोरेजका लागि उडेको एउटा जहाज पुनः एंकोरेज विमानस्थलमै फिर्ता हुन बाध्य भएको छ । मध्य आकाशमा उडिरहेको अलास्का एयरलाइन्सको जहाजभित्र एकजना यात्रुले नांगिएर तमासा गरेपछि जहाजलाई उडान भरेकै विमानस्थलमा फिर्ता गर्नुपरेको हो । समाचार अनुसार जहाजभित्र रहेको एकजना यात्रु जहाजको बाथरुममा छिरेर जिउका सबै कपडा..
ट्वाइलेटमा त दिसा पिसाब पो गरिन्छ । तर भारतमा पनि ट्वाइलेटमै बिहे गरिएको छ । अनौठो लाग्ने यो घटना भारतको छत्तीसगढस्थित बिलासपुरको हो । समाचार अनुसार शबा नवाज नामक युवतीले १० महिना अघि नै ग्र्ने भनी तय भएको आफ्नो बिहे नगर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । हुनेवाला बेहुलाको घरमा ट्वाइलेट नभएको भनी उनले हुनै लागेको बिहे नगरेपछि ठूलै चर्चा कमाएकी..
उडिरहेको विमानको इन्जिन फेल ! पाइलटले गरे सडकमै अवतरण
क्यालिफोर्निया । उडानका क्रममा हवाईजहाजको इन्जिन फेल भएपछि एक पाइलटले क्यालिफोर्नियाको राजमार्गमा नै आपतकालीन अवतरण गराएका छन् । यस क्रममा कसैलाई सामान्य चोटपटकसम्म लागेन । ‘कोस्टा मेसा फायर एन्ड रेस्क्यू’ ले ट्विटरमा हालेको तस्वीरमा खुल्ला सडकमा एउटा सानो जहाज पार्क गरिएको देखिन्छ । एनबीसी साउथर्न क्यालिफोर्नियाका अनुसार २४..
यी ३ राशि भएका केटालाई मिल्छन् सुन्दर श्रीमती, तपाईको राशि कुन् हो ?
व्यक्तिको कुण्डलीले उसको बारेमा केही राज खोल्छ । उसको चरित्र देखि लिएर उसको भविष्यका बारेमा केही पत्ता लाग्छ । यही कारण विवाह भन्दा पहिला कुण्डली दाँज्ने गरिन्छ । जान्नुहोस् कुन राशिका पुरुषको पत्नी खुसी रहन्छन् : १. कन्या राशिका व्यक्ति ह्याण्डसम देखिन्छन् । जो सुकै केटी यस्ता केटालाई पतिकोरुपमा पाउन चाहान्छन् । यो राशिका व्यक्ति..
एउटा यस्तो भवन, जो पूरै विश्वमा सबैभन्दा धेरे बदनाम छ । थाहा छैन, तपाइँलाई यसबारेमा जानकारी छ या छैन । यदि छैन भने थाहा पाउनुहुनेछ अब । यो भवन बाहिरबाट जस्तो देखिन्छ, भित्रको दुनियाँ पूरै उल्टो छ । देख्दा त यो भवन अन्य आम भवनहरु जस्तै नै देखिन्छ । हङ्कङकाे फूजी इलाकामा रहेको यो भवन त्यसमा बस्ने यौनकर्मी महिलाहरुका कारण विश्वभर नै बदनाम छ ।..